YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, June 20
ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်ကို ဘယ်အချိန်ထိ လွှတ်ထားမှာလဲ
သမ္မတကြီး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌကြီးအား ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ​​​​​ဦးကျော်မြင့် နှင့် ပတ်သက်၍သိစေခြင်ပါသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ​​​​​ဦးကျော်မြင့် (ခ) လီယောင်ကျန်းသည် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အရေခြုံထားပြီး ပါတီ၏အရှိန်အဝါဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် လွတ်တော်အမတ်တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။၎င်းသည် တရုတ်သွေးစပ်သော ခိုလုံလီရှောလူမျိုးဖြစ်သည်။
ယခင်က နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ပန်ဆေးဒေသရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများသည် လက်ဖက်စိုက်ခြင်း၊ မုန့်ညှင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဆိတ်မွေးမြူခြင်း စသည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး သမာအာဇီဝ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့် အုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပန်ဆေးဒေသရှိ ခိုလုံလီရှောကျေးရွာအုပ်စုများမှ ၄င်း၏ တူ၊တပည့် များအား ကျေးရွာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် တင်မြှောက်ပြီး ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ဘဏ္ဍာရေးအတွက်ဟု အကြောင်းပြကာ ရိုးသားသော ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား မက်လုံးပေးခြင်း၊ တစ်ဖက်လှည့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍ ၄င်းတို့နယ်မြေအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးခိုင်းခြင်းအား တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထွက်ရှိလာသောဘိန်းများအား ၄င်းတို့အဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။
ထို့ပြင် တရားမဝင် သစ်ခိုးခုတ်ခြင်း၊ မီးသွေးဖုတ်ခြင်း နှင့် ညပိုင်းတွင် တစ်ဘက်တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်ပိုင် စက်လှေဆိပ်မှ သစ်နှင့်မီးသွေး များခိုးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံများအား ဘိန်းဖြင့်မှိုင်းတိုက်ထားခြင်း တို့အား ၄င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ၄င်းကိုယ်တိုင်ပင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဟု အမည်ခံကာ ၄င်းအုပ်ချုပ်ရာနယ်မြေတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပိုမိုဖြစ်ထွန်းရေး နှင့် တရားမ၀င် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကြီးကြပ်ညွှန်ကြားလျက် ရှိပါသည်။ သို့သော် အပြင်ပန်းတွင် ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်သည် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကြောင်းပြကာ ရန်ကုန် သုဝဏ္ဏရှိနေအိမ်တွင် အေးအေးလူလူနေထိုင်သည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ရှိနေပါသည်။
ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်သည် ၄င်း၏သားဖြစ်သူ (နိုင်ငံခြားတွင် ကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သူ) ထံ ခေါင်းဆောင်ရာထူးအား မိမိသဘောဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးရန် လျာထားခြင်း၊ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများစွာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား ဘိန်းမှိုင်းတိုက်ထားခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်း၏အဖွဲ့ဝင် အချို့နှင့် ဒေသခံများမှ မကျေမနပ်ဖြစ်လျက် ရှိပါသည်။သို့သော် ဒေသရှိ အစိုးရအာဏာပိုင် အသီးသီးအား အသွင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကျောထောက် နောက်ခံပြုထားခြင်း၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် လွှတ်တော်အမတ် အရေခြုံထားခြင်း၊ လက်နက်အင်အား ပြထားခြင်းတို့ကြောင့် မည်သို့မှ မတွန်းလှန်နိုင်သည့်အပြင် သဘောကျ ထောက်ခံအားပေးနေရသည့် အခြေအနေဖြင့်သာ ကျီးလန့်စာစား နေကြရပါသည်။
ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်သည် ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားအလို့ဌာ ရေရှည်အစီအစဉ်ဖြင့် ဒေသအတွင်း ဘိန်းမှိုင်းတိုက်ထားမှု့ကြောင့် ၄င်းအုပ်ချုပ်ရာဒေသတွင်သာမက နမ့်ခမ်းမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ ရှမ်း၊ ပလောင်၊ ကချင်လူငယ်များစွာမှာ ဘိန်း အလွန်အကျွံ့သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး လူညွန့်တုံး ဘဝပျက်ကာ ဘိန်းစိုက်၊ဘိန်းရှု ဘဝဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ကြရပါသည်။ ထို့ပြင် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ယွင်းကာ ခိုးဆိုး၊လူသတ်၊ဓါးပြတိုက်သည်အထိ ဆိုးရွားလာခြင်းကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေအေးချမ်းသာယာရေးကို များစွာထိခိုက်လာပါသည်။ တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ အချို့တရုတ်နိုင်ငံသားများပင် နမ့်ခမ်းမြို့သို့လာရောက်ပြီး တပျော်တပါး ဘိန်းဝယ်ယူ သုံးစွဲကြသည့် အခြေအနေမျိုးအထိပင် ဖြစ်လာပါသည်။
နမ့်ခမ်းမြို့ရှိ ဦးအိုက်စံခေါင်းဆောင်သော မြို့မပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့သည်ပင်လျင် ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်တို့အဖွဲ့၏ လုပ်ရပ်များအား မကြိုက်နှစ်သော်လည်း အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ပိုက်ကြည့်နေရပါသည်။
(၈.၄.၂၀၁၃) ရက်နေ့က နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ပန်ဆေးဒေသရှိ ဘိန်းချက်စခန်း (၃) ခုကို တအာင်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ဝါယော့ပြည်သူ့စစ်စခန်း (၃) ခုမှ ဘိန်းဖြူ (၁) ကီလိုဂရမ်၊ ဘိန်းမဲ (၂) ပိဿာ၊ ယာမ(ရာဘ) အလုံး (၄,၀၀၀)တို့အား သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း ပလောင်(တအာင်း) အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး PWO မှထုတ်ပြန်သော သတင်းအရ ကြားသိရပါသည်။
နမ့်ခမ်းဒေသခံတစ်ဦးက “ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်စဉ်တုန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို မဲထည့်ပေးကြပါတဲ့။ သူကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာရင် တရားဝင်ဘိန်းစိုက်ခွင့် ပေးမယ်တဲ့။ ဒီတော့ တစ်နယ်လုံးက ပန်ဆေးနယ်မှာ ဘိန်းသွားစိုက်ကြတာပေါ့။ အခွန်တောင် နည်းသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဘိန်းဝယ်သူတောင် ရှာနေစရာမလိုပါဘူး။” ဟု ပြောပါသည်။
(၆.၂.၂၀၁၃) ရှမ်းပြည်နယ်နေ့တွင် ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်၏ တူဖြစ်သူ ရဲအောင်ထွေး(ခ)လိဖန် ဦးဆောင်သည့် အပေါင်းပါများမှ ဆေးဝါးအလွန်အကျွံ့ သုံးစွဲပြီး ဦးလေးအားကိုးဖြင့် မူးယစ်ရမ်းကားကာ ကျားဖြူပါတီဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီး၏မြေးအား ဓါးဖြင့်ခုတ်ကာ မသေမချင်း သတ်ခဲ့သည့်အမှုအား ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရရှိပြီးနောက် (၄.၆.၂၀၁၃)နေ့က မူဆယ်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်လာစဉ် အစောင့်ရဲထံမှ သေနတ်လုယူပြီး ပစ်ခတ်ရာ ရဲ(၁)ဦးသေ (၂)ဦးဒဏ်ရာရပြီး တရားခံများ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ နမ့်ခမ်းနှင့် မူဆယ်ဒေသခံများမှ ထိုကဲ့သို့ရမ်းကားမှုအတွက် ထိန့်လန့်နေကြပါသည်။ ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်၏ တူဖြစ်သူရမ်းကားမှုသည် သာမန်ရာဇ၀တ်သားကြီးများပင် မစဉ်းစားရဲသော မလုပ်ရဲသော ပြစ်မှုဖြစ်သဖြင့် ၄င်း၏ဦးလေးအားကိုးဖြင့် အကာအကွယ် ရနေသောကြောင့် လုပ်ရဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိသာနိုင်ပါသည်။
ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်သည် ပန်ဆေးပြည်သူ့စစ်အင်အား (၃၀၀)ခန့် ပိုင်ဆိုင်၍ ကိုယ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပုံစံဖြင့် နမ့်ခမ်း၊ မူဆယ်တ၀ိုက်တွင် ထင်တိုင်းကြဲ လုပ်တိုင်းရ ကြံတိုင်းအောင် ဖြစ်ကာ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေခြင်းမှာ သိသာထင်ရှားလှပေသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ဘိန်းခင်းများအား ဖျက်ဆီးကာ ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ဘိန်းဘုရင် ဦးကျော်မြင့်သည် ဒေသရှိ အစိုးရအာဏာပိုင် အသီးသီးအား အသွင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် လွှတ်တော်အမတ် အရေခြုံ၍ ပန်ဆေးဒေသတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဘေးရန်ကင်းစွာဖြင့် လူသားအားလုံး အညွှန့်တုံးစေမည့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ထုတ်လုပ်ခြင်း၊နိုင်ငံတော်၏ သယံဇာတများဖြစ်သော သစ်နှင့်မီးသွေး ခိုးထုတ်ခြင်း နှင့် တရားမဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို သား၊ တူ တပည့်များစွာဖြင့် တရားဝင်အမိန့်ရကဲ့သို့ ပျော်ပါးအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ဤခေတ်အခါသည် မဏ္ဍိုင်ကြီးများ အသီးသီးပေါ်ထွက်၍ တန်းတူ၊အခွင့်အရေးတူ သာတူညီမျှသော ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ဆောင်နေသော အချိန်အခါ ဖြစ်ပါသည်။ သန်း(၆၀)သော ပြည်သူများအတွက် တရားဥပဒေစိုမိုး မျှတရေးကို အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နေသော အခြေအနေလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေ အချိန်အခါကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းနေပါလျက်နှင့် ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်လို လူများ ရှိနေသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာများစွာ ဖြစ်ပေါ်ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်၊ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တို့အား “ ပန်ဆေးဦးကျော်မြင့်ကို ဘယ်အချိန်ထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဤကဲ့သို့ ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားအုံးမှာလဲ ” လို့ မေးလိုက်ပါရစေ။
BY YeYint Nge ... 6/20/20130comment
ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးတစ်ရုံးအတွင်း သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများ တစ်နာရီကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်ကြုံတွေ့သူများက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါရုံး၏၀င်ပေါက်သို့ အသေခံဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်သူတစ်ဦးက ကားတစ်စီးဖြင့်ဝင်ရောက် ဖောက်ခွဲခဲ့ပြီး သေနတ်သမားလေးဦး အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်သွားသည်ကို သူမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရုံး၏ အပြင်ဘက်မှ ကင်မရာသမားတစ်ဦးက ဘီဘီစီသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။ ယခုအခါ အစိုးရဘက်တော်သား တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မိုဂါဒစ်ရှူးမြို့တော်ရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးဝင်းကို အကာအကွယ် ပေးထားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ထိခိုက်သေဆုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရသေးကြောင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
အယ်လ်ခိုင်ဒါအုပ်စုတစ်စုဖြစ်သော အယ်လ်ရှာဘတ်အဖွဲ့က ယင်းတိုက်ခိုက်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် ၎င်း၏လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဝင်များရှိကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ၏ နေရာများစွာသည် အတောမသတ်သော စစ်ပွဲဇုန်များအဖြစ် ရှိနေပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ထက်မနည်း ကာလတိုင်အောင် ထိထိရောက်ရောက် အုပ်ချုပ်နိုင်သည့် အမျိုးသားအစိုးရတစ်ရပ်မရှိဘဲ ဖြစ်သန်းခဲ့ရသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် ကုလသမဂ္ဂက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားသော အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က အယ်လ်ရှာဘတ်အဖွဲ့အား တိုက်ထုတ်ပြီးနောက် နိုင်ငံ၏အဓိကမြို့ကြီး အများစုကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရုံးသည် မိုဂါဒစ်ရှူးမြို့တော် တောင်ပိုင်းရှိ အစောင့်အကြပ်များ ထူထပ်စွာရှိသည့် လေဆိပ်နှင့် ကပ်လျက်တွင် တည်ရှိသည်။ ““အသေခံဗုံးခွဲသမားတစ်ယောက်က UNDP ရုံးရဲ့အ၀င်ဂိတ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေ ၀င်သွားပြီး သေနတ်တွေနဲ့ပစ်တော့တာပဲ””ဟု အကြီးတန်းရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူက ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားသည်။ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ နာမည်ထုတ်ဖော် မပြောသောကင်မရာသမားက ဖောက်ခွဲမှုအတွင်း လူအချို့ကို ထိခိုက်သွားစေခဲ့ကြောင်း၊ သူကိုယ်တိုင် လူသုံးဦးကို စစ်တပ် လူနာတင်ကားတစ်စီးဆီသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်း ဘီဘီစီသတင်းဌာနသို့ ပြောကြားကာ အဆောက်အအုံပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီးနောက် ဒေသခံများ ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးကြပြီး အဆောက်အအုံအချို့မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက် ပျက်စီးသွားခဲ့သည်ဟု သူကဆိုသည်။
မိုဂါဒစ်ရှူးမြို့တော်ကို နှစ်နှစ်ထက်မနည်း ထန်းချုပ်ထားခဲ့ဖူးသော အယ်လ်ရှာဘတ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့သည် အစိုးရဘက်တော်သားဖြစ်သော တပ်ဖွဲ့များ၏ဖိအားပေး တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်တွင် ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။ သို့သော် မြို့တော်အတွင်း၌ ရံဖန်ရံခါ အသေခံတိုက်ခိုက်မှုများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဆိုမာလီယာ၏ အခြားသောမြို့ကြီးများမှလည်း ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် မြို့ငယ်လေးများနှင့် ဆိုမာလီယာ အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရှိ ကျယ်ပြောလှသောကျေးလက်ဒေသ တစ်ခွင်တစ်ပြင်ကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဆဲ ဖြစ်သည်။
ဆိုမာလီယာတွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာခြင်းက အခြားနိုင်ငံများသို့ ထွက်ပြေး၍ အခြေချနေသော နိုင်ငံသားများကို ပြန်လာအောင်စေ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများနှင့် နိုင်ငံခြားသံရုံးများကလည်း တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ အာဖရိကသမဂ္ဂ၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၈,၀၀၀ခန့်သည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလက လွှတ်တော်အမတ်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည့် သမ္မတဟတ်ဆန် ရှိတ်ခ်မိုဟာမတ်၏အစိုးရကို ဆိုမာလီယာနိုင်ငံအတွင်း၌ ထောက်ပံ့ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်း၏အစိုးရအဖွဲ့ ကို ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုထက်မနည်းသော ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့က အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
သရုပ်ဆောင်မေဇွန်အား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် ၄ လချမှတ်
Friday, 21 June 2013 02:35
သရုပ်ဆောင်မေဇွန်အား အမိန့်ချမှတ် ပြီးနောက် ခေါ်ဆောင်လာစဉ်
အိမ်အကူမလေး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသည့် သရုပ်ဆောင် မေဇွန်အား ဇွန် ၂၀ ရက်က အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သရုပ်ဆောင် မေဇွန်အား အနောက်ပိုင်းခရိုင် ဒုတိယတရားသူကြီး (၃) မှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၂(၂)အရ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ်၊ ပုဒ်မ ၃၂၄ အရ ထောင်ဒဏ်သုံးလနှင့် ပုဒ်မ ၃၂၃ အရ ထောင်ဒဏ် ၁ လ တို့ကို သီးခြားကျခံစေရန်နှင့် ချုပ်ရက်ကို ထုတ်နုတ်ခံစားစေပြီး အယူခံဝင်ခွင့် ရှိကြောင်း ဇွန် ၂၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မေဇွန်မှာ MRTV-4 ၏ Flower & Butterfly ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် ဗဟိုလမ်းတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် ညက အိမ်ဖော်မလေးသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲဆိုခံရခဲ့ရပြီး ဇွန် ၂၀ ရက်တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မေဇွန်သည် ကျောင်းကိစ္စ အရေးကြီးသဖြင့် ခရီးထွက်စဉ် သော့မှာ ၎င်းနှင့်အတူ ပါသွားပြီး ယင်းသော့ကို မနုနုလွင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မရှိသဖြင့် အခန်းထဲတွင် သော့ခတ်ခံထားရကြောင်း ထင်ရှားခဲ့ပြီး...
အဆိုပါ ပြစ်ဒဏ်အပေါ် တရားခံ၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးအောင်မြင့်က ''ဒီပြစ်ဒဏ်က ပြင်းထန်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး မေဇွန်က ကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသူဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့သူ ဖြစ်တာရယ်၊ အရင်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မရှိခဲ့ဖူးတာရယ်ကြောင့် ဒီပြစ်ဒဏ်အပေါ် သက်ညှာပေးဖို့ အယူခံ တက်သွားမှာပါ'' ဟု ဇွန် ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
သေဆုံးခဲ့သည့် မနုနုလွင်သည် နောက်စေ့၊ လက်မောင်း၊ ပခုံးတို့တွင် ဖူးယောင်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ လက်ဖျံ၊ ညာလက်ကောက်ဝတ်နှင့် ၀ဲပါးစောင်းတွင် သွေးခြည်ဥသည့် ဒဏ်ရာများနှင့်တကွ အရေပြားတွင် အစင်းရာများ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးပြီး ရင်ခွဲ စစ်ဆေးချက်အရ သေဆုံးသူသည် ရရှိသည့် ဒဏ်ရာများကြောင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးပြီး ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်အရ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်း၍ သေဆုံးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဆေးစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း အဆိုပါ တရားသူကြီးက ဆိုသည်။
အခြားအိမ်အကူဖြစ်သည့် မဇင်ဇင်ထိုက်၏ ထွက်ဆိုချက်အရ မေဇွန်သည် အိမ်အကူများအား မကြာခဏ နှိပ်စက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မေဇွန်သည် ကျောင်းကိစ္စ အရေးကြီးသဖြင့် ခရီးထွက်စဉ် သော့မှာ ၎င်းနှင့်အတူ ပါသွားပြီး ယင်းသော့ကို မနုနုလွင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မရှိသဖြင့် အခန်းထဲတွင် သော့ခတ်ခံထားရကြောင်း ထင်ရှားခဲ့ပြီး မေဇွန်နှိပ်စက်သဖြင့် သေဆုံးရခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ ရသည်ဟု တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မေဇွန်မှာ စိတ်အလိုမကျပါက အိမ်ဖော်များအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများ ရှိကြောင်း၊ ပါးရိုက်ခြင်း၊ ဆံပင်ဆွဲဆောင့်၍ ကြမ်းပြင်၊ နံရံများဖြင့် ရိုက်ခြင်း၊ ပက်လက် လှန်ခိုင်းပြီး ဗိုက်ပေါ်သို့ တက်ခုန်ခြင်းများနှင့် အိမ်ဖော်များ အချင်းချင်း ကြက်မွေးဖြင့် ရိုက်ခိုင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်ဟု ရဲစစ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Jun 20, 2013 11:34am
အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကွယ်ပျောက်မှာကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတော်မူသော အင်းစိန် ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာန မဟာနာယက ဆရာတော် အရှင်တိလောကာဘိဝံသ မှ အမျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပုံများကိုလည်းကောင်း။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်များ အား ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအတိုင်း ငြိမ်ချမ်းစွာဖြင့် မိမိဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြရန် တိုက်တွန်းတော်မူထားသော မိန်ကြားချက်။
အင်းစိန် ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာန မဟာနယက ဆရာတော် အရှင်တိလောကာဘိဝံသ သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးလူဝတ်လဲကား အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒါဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခြင်ခံခဲ့ရပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားသည် သံဃာ မဟာနာယက အဖွဲ့၌ တွဲဖက်အကျိုးတော်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း ကမ္ဘာအေးသံဃာတက္ကသိုလ်၌ အဘိဓမ္မာ ပါမောက္ခချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
BY YeYint Nge ... 6/20/2013 1 comment
စင်္ကာပူမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှု တိုင်းထွာချက်PSI 310 ရှိ
Jun 20, 2013 10:50am
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ၁၆နှစ်တာအတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ လေထုညစ်ညမ်း အုံ့ဆိုင်းနေမှုဟာ တစ်ပတ်မက ရှည်ကြာနိုင်ကြောင်း စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှမ်လွန်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်က ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒီမီးခိုးငွေ့တွေဟာ ဆူမာတြားကျွန်းက ခြောက်သွေ့ ရာသီကုန်ဆုံးမယ့် စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလအထိ ကြာကောင်းကြာသွားနိုင်ကြောင်း၊ ဒီလေထုညစ်ညမ်းမှုဟာ အင်ဒိုနီးရှားဘက်မှာ တရားမ၀င် တောမီးရှို့မှုတွေကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဒီလုပ်ရပ်တွေမှာ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား လုပ်ငန်းတွေလဲ ပါဝင်ပတ်သက်နေ တယ်လို့ အင်ဒို တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုကြောင်း၊ ဒီလုပ်ရပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ စင်္ကာပူကုမ္မဏီတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုလက်ရှိစင်္ကာပူမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှု တိုင်းထွာချက် PSI (Pollutant Standards Index) ထုတ်ပြန်မှုတွေအရ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီမှာ PSI 310 ရှိခဲ့ပြီး ည၉ နာရီအချိန်မှာ PSI 197 ရှိနေပါတယ်။ PSI ယူနစ်မှာ 300 အထက်ကို အန္တရာယ်အဆင့်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
စင်္ကာပူအစိုးရက လမ်းပေါ်သွားလာသူတွေကို နှာခေါင်းကာမျက်နှာဖုံးတွေ ၀တ်ဆင်ကြဖို့ သတိပေးထားသလို အဲဒီ့ မျက်နှာဖုံး သုံးစွဲမှုများပြားလာလို့ ပြတ်လပ်မှုတွေ ရှိတယ်လို့လည်း စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာတချို့က ဆိုပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာ သိန်းနဲ့ချီရှိပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုအခြေအနေကြောင့် ဈေးဆိုင်တချို့၊ အစားအသောက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတချို့ ရပ်နားထားသလို တချို့ စီးပွားရေးကုမ္မဏီတွေက ၀န်ထမ်းတွေကို အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ စီမံပေးကြောင်း မြန်မာကွန်ပျုတာပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ စင်္ကာပူ အစိုးရဟာ မီးခိုးငွေဒဏ်ကြောင့် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း ကန့်သတ်ချက်တချို့နဲ့ ပေးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
PSI ဆိုတဲ့၊ please stay indoor အဲလေ....Pollutant Standard Index တွေ၊ များနေတယ်ပေါ့..
PSI ဟာ လေထုထဲမှာ အဓိကအားဖြင့် Sulphur dioxide, Nitrogen dioxide, Ozeone, Carbon monoxide နဲ့ လေထုထဲမှာအခြားထူးခြားစွာပါဝင်နေမယ့်
Particles လေးတွေကို၊ တိုင်းတာတာဖြစ်ပြီး၊ PM 10 လို့လည်းခေါါကြပါသေးတယ်။
အရွယ်အစားအားဖြင့် 10 micron နဲ့ 10 micron အောက်မှာရှိတဲ့၊
dust လို Particles လေးတွေကို၊ တိုင်းတာနိုင်တဲ့စနစ်မို့ PM 10 ရယ်လို့ ခေါါကြတာပါ။
ကျွန်းကလေးဆိုတဲ့ tinny island လေးမှာ၊ ကွန်းခိုနေခဲ့တာ..
(၇) နှစ် (၇) မိုးကြာပါပြီ..
နှစ်စဉ် ဇွန်လဆန်းနဲ့ ဇွန်လလည်၊ တခါတလေ
စက်ာပူရကျွန်းတခိုမှာလည်း၊ haze ဆိုတဲ့ မီးခိုးမြူတွေ
ဒီနှစ်မှာတော့ တော်တော်ဆိုးသလို၊ PSI level ဟာ
မကြုံစဖူး (၃၀၀) ကျော်အထိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။
မိုးအတုဖန်တည်းပေးဖို့ ဆိုတာကလည်း "တိမ်" တွေရဲ့ အနေအထားနဲ့
ကျွန်းကလေးရဲ့ အနေအထားကြောင့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး..
ဒီတော့လည်း PSI တက်နေတုန်း please stay indoor ပေါ့လေ..
လေထုညစ်ညမ်းမှု air pollution တွေပေါ်ပေါက်စေတတ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေရဲ့ ပုံလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးရေး အကြံအစည်ကို ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ဖို့ လိုရခြင်းအကြောင်း
ဘွားခနဲ ပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေရဲ့ ပီအာရ် အကြံအစည်
Published on June 20, 2013 by တိုင်းကျော်
အခုရက်ပိုင်း လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပီအာရ် လို့ခေါ်တဲ့ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုမှု စနစ် ကျင့်သုံးဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေ တခုပြီး တခု ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီ သတင်းတွေ ဆက်စပ် သုံးသပ်လိုက်ရင် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမားရိုးကျစနစ်နဲ့ အနိုင်ရဖွယ်လမ်း မမြင်နိုင်တာကြောင့် ပီအာရ်စနစ်ကို အသုံးပြုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ကြံစည်လာတယ်ဆိုတာ ဘွားခနဲ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုကြံစည်သလဲ၊ ပီအာရ်စနစ် ကျင့်သုံးရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ခုတပတ် ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတပတ်အတွင်း ပထမဦးဆုံး ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီကပါ။ ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့က ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီက လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ မဲအများဆုံး ရရှိသူကို အနိုင်ပေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် (First Past The Post- FPTP System) အစား အခြေခံဒီမိုကရေစီ သဘောတရားနဲ့ ကိုက်ညီပြီး နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့် စနစ်တရပ်ဖြစ်တဲ့ အချိုးကျကိုယ်စားလှယ်စနစ် (Proportional Representation-PR System) ကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်နဲ့အတူ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြုပြင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတမ်းတစောင်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီ တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါ ပီအာရ် စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးချင်တဲ့ ပါတီရှိသလို လက်ရှိ မဲအများဆုံးသူ အနိုင်ရတဲ့ စနစ်ကိုပဲ ဆက်ပြီး ကျင့်သုံးလိုတဲ့ ပါတီတွေ ရှိတဲ့အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးပါ ဆိုပြီး လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ပီအာရ်စနစ်နဲ့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်တွေ လိုအပ်တာကြောင့် ဒီ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲ လွှတ်တော်က အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ လိုတဲ့အကြောင်းလည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် ဝေဖန်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီ မိတ်ဆွေ ၁၀ ပါတီထဲပါတဲ့ တိုင်းရင်းသား ၅ ပါတီရဲ့ သဘောထားပါ။ သူတို့ပါတီတွေအနေနဲ့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးဖို့ တောင်းဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြောင်း လက်မှတ်ကို အသုံးချပြီး ပီအာရ်ကို ကျင့်သုံးလိုတယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆီ မရိုးမသား တင်ပြခဲ့တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက ဖြေရှင်းကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း မကြာသေးခင်ကမှ တောင်ကြီးမှာ ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ ညီလာခံမှာ ပီအာရ်စနစ်ကို လက်မခံကြောင်း အတိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောရရင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်ကတည်းက အန်ဒီအက်ဖ်ပါတီ ဦးဆောင်ပြီး တင်ပြထားတဲ့ မှန်ကန်မှုမရှိမှန်းလည်း သိတဲ့ စာတမ်းကို အခြေခံပြီး ပီအာရ်စနစ်ကို တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအပါအ၀င် ပါတီတချို့က လက်ခံ ကျင့်သုံးချင်သယောင် လိမ်ညာ သတင်းထုတ်ပြန်ပြီး လွှတ်တော်ကို တင်လိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ရောက်နေစဉ် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်၊ လိုအပ်ရင် ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး အရိပ်အမြွက် ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးအနေနဲ့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရလဒ်ကို ကြိုတင်မှန်းဆပြီး ပြောဆိုတဲ့ စကားမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီးသေချာစေတာကတော့ သိပ်မကြာသေးခင်တုန်းကပဲ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ တောင်သာအမတ် ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ပါ။ သူက တပါတီကြီးစိုးတဲ့စနစ် ပပျောက်အောင် ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးသင့်တယ်၊ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင့်သုံးလာတာ နှစ်ထောင်နဲ့ချီ ရှိနေပြီ၊ မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း အသိဥာဏ် နိမ့်ကျသူတွေ မဟုတ်တော့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးနိုင်တယ် ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီအဆက်အစပ်တွေကိုကြည့်ရင် လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အယ်လ်ဒီကို ဘယ်လိုမှ အနိုင်မရနိုင်ဘူးလို့ တွက်ဆထားပြီးဖြစ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဟာ ပီအာရ်စနစ်ကိုကျင့်သုံး၊ လွှတ်တော်ထဲ အဆင်သင့်ရောက်နေတဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ စစ်ဗိုလ်အမတ်တွေနဲ့ ပေါင်း၊ သမ္မတရာထူး ရအောင်ယူပြီး အာဏာကို ဆက် ချုပ်ကိုင်သွားမယ့် သဘော ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ လက်ရှိ ပီအာရ်ပြဿနာ အငြင်းပွားနေတာနဲ့ပဲ အရေးကြီးတဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ကျင်းပနိုင်ရေး ဆိုတာ မျက်ခြည်ပြတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပီအာရ်စနစ်ဆိုတာဟာ မဲရုံတခုစီအလိုက် အနိုင်ရသူ တိုက်ရိုက် မပေါ်ပေါက်တာကြောင့် မဲလိမ်၊ မဲခိုးနဲ့ မဲမသာမှုလုပ်တာတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ရ အလွန် ခက်ခဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းသားကြီးမလုပ်ရ ပတ်မကြီးထိုးဖောက်မယ့် ပါတီ တချို့နဲ့ အာဏာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီး လုယူထားချင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးစိုးတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးရေး အကြံအစည်ကို ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ဖို့ လိုနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Time magazine မျက်နှာဖုံး ဦးဝီရသူအားဖေါ်ပြ
ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ထွက်မည့် Time magazine မျက်နှာဖုံး
Time မဂ္ဂဇင်းအား ကန့်ကွက် လိုသူများ
Time ရဲ့ လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်
roberta-roelofsus@tw4.com ရယ် time_europe@customersvc.com နဲ့
ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ၀က်စာမျက်နှာ www.time.com ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ့်ရှေ့က ဂျင်နရေးရှင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြောတတ်ကြသည့် အဖြစ်များ
By မလေး အိမ့်ချမ်းမြေ့ (facebook)
..... ဆွေမျိုးများထဲမှာလည်း ကွဲပြားမှုများက များစွာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းသာ ကွဲသော်လည်း၊ ဦးကြီးတစ်ဦးက ထောက်လှမ်းရေးစစ်ဘက်အရာရှိဖြစ်နေပြီး၊ နောက်တစ်ဦးက ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ အကြီးအကဲတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ သူတို့နှစ်ဦးကလည်း ဆွေပြတ်မျိုးပြတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့သော ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးအခေါ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ များစွာဖြင့် စုံစိလှသော မိသားစုကြီးတစ်စုထဲမှာ မွေးဖွားကြီးပျင်းလာခဲ့ရ၍ နိုင်ငံရေးကို နားရည်ဝအောင် ကြားနေခဲ့ရသည်။
“မြန်မာပြည်ကြီး ဘယ်တော့ တိုးတက်ငြိမ်းချမ်းမှာလဲ” ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့်၊ ဒီမိုကရေစီ အလင်းရောင်မှိန်ပြပြကို မျှော်မှန်းကာ၊ မဲမှောင်ကျဉ်းမြောင်းလှသော လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်မျှော်လင့်ရင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသူတွေထဲတွင် ဦးကြီးနှင့်ဖခင်ကြီးလည်း ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
ထိုသို့သော မဲမှောင်လှသော လှိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ အလင်းရောင်မှိန်ပြပြကို စောင့်မျှော်ရင်း သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့သူတွေရှိသကဲ့သို့၊ ယုံကြည်ချက်ကိုလက်ကိုင်ထားရင်း ဘဝပျက်သွားသူတွေ၊ အသက်ပေးသွားသူတွေလည်း အများကြီးရှိသေးသည်။
အခုတော့ ဒီမိုကရေစီ အလင်းရောင်ထဲကို စတင်ချည်းနင်း ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီ။ ထိုသို့စတင်ချည်းနင်းဝင်ရောက်လာနိုင်တော့မှ လိုဏ်ခေါင်းအနက်ထဲ ဘာဖြစ်ခဲ့သည်ကို လက်တွေ့မကြုံခဲ့ရသောလူငယ်တွေက၊ ဟိုးတုန်းက အနစ်နာခံ ဘဝပျက်ခံခဲ့သူတွေကို စကားဖြင့်လည်းကောင်း၊ စာဖြင့်လည်းကောင်း၊ တံတွေးထွေး၊ ပျက်ရယ်ပြုနေကြသည်ကို ဦးကြီးတို့ မြင်တွေ့မည်ဆိုပါက မည်မျှလောက် ရင်ထု မနာဖြစ်လိမ့်မည်လဲ။
ထိုသို့လှောင်ပြောင်ပျက်ရယ်ပြုခံရသူများသည်လည်း မိမိလုပ်သမျှကံ မိမိထံပြန်ရောက်လာလေကြသလားတော့ မပြောတတ်။
သူတို့အလှည့်တုန်းကလည်း လူကြီးသူမ များကို နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောခဲ့ကြသူများ ရှိလေသည်။
“နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ ငါးတန်းအောင်သည်၊ လေးယောက်ပေါင်းမှ ဆယ်တန်းအောင်သည်” “နဖူးပြောင်ပြောင်၊ ဦးမောင်မောင်ကို အရူးထောင်ကို ပို့လိုက်၊ ပို့လိုက်” “စိတ်ပုတီးနှင့် အဘိုးကြီးက အရေးကောင်းဒိန်းဒေါင်းမှာ ဖျာဝင်ခင်းတာ” ဟု၊ လူကြီးသူမ များကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ပြောခဲ့ကြရုံမက၊ ဓားထက် ထက်မြိသော ကလောင်များဖြင့်လည်း အစွမ်းပြခဲ့ကြသေးသည်။
“ငါခင်းနေတဲ့ ဖျာဟာ မင်းတို့ထိုင်ဖို့ပါ” ဟု ဦးနုပြောစကား မဆုံးခင်၊ “ဘဘတို့ သတ္တိမရှိဘူးဆိုရင်၊ ပုဆိုးချွတ်ပြီး ထမီဝတ်ထားလိုက်ပါလား” ဟု ဦးနုကို လူရှေ့မှာ အရှက်ရအောင်ပြောခဲ့ဖူးသည့် သူတစ်ဦး၏ စကားကြောင့်လည်း အန်တီစန်းစန်းနု မှာ ထိုအကြောင်းကိုပြန်ပြောတိုင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျခဲ့သည်များကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ မြင်တွေ့ခဲ့ရဖူးသည်။
ထိုသို့သော လူကြီးသူမများကို လှောင်ပြောင် ကဗျာရွတ်ခဲ့ ကြသည့် သူများကို၊ ယခုခေတ် လူငယ်လေးတွေက တတ်လာသည့် ပညာများကို လက်ကိုင်ပြုပြီး တစ်ဖန် လှောင်ပြောင်ကြလေပြီ။
သူတို့ရှေ့ ဂျင်နရေးရှင်းက အနစ်နာခံခဲ့သော သူများကို ပညာမတတ်ရကောင်းလား၊ လေသမားတွေကြီးပဲဟု... ကဗျာများ၊ စာများဖြင့် တဖန်ပြန်လည် နှိမ်ချကြလေပြီ။
ပညာလေး အနည်းငယ်တတ်လာကာမှ၊ ကိုယ့်ရှေ့က ဂျင်နရေးရှင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြောတတ်ကြသည့် အဖြစ်များကို အခြားလူမျိုးတွေထံမှာ လက်လှမ်းမမှီ၍လား မသိ၊ တစ်ခါမှ မမြင်မိ မကြားမိ။
"အတုံ့ အလှည့် ဆိုတာ ရှိစမြဲ၊ ထို့အပြင် လူဆိုသည်မှာ မည်သူမျှ အမှားနှင့် မကင်း။ "
ကိုယ့်ရှေ့ဂျင်နရေးရှင်းမှလူကြီးများပြုခဲ့လုပ်ခဲ့မိသော အမှားများကို ကလောင်သွားထက်တိုင်း လှောင်ပြောင်သရော်သည်ထက်၊ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်ခြေလှမ်းသစ်တို့ လန်းဆန်းစေချင်မိသည်။
(ရေးလက်စ ဝတ္ထုထဲမှာ ထည့်သင့်ပါ့မလား.......လို့ပါ)
ထိုင်းက ဖမ်းထားသူတွေ မြန်မာပြည်က ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးမယ်
20 ဇွန်လ 2013 - 01:26
ထိုင်းမှာ အဖမ်းခံထားရသူ တချို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဖမ်းခံထားရပြီး မြန်မာနိုင်ငံကလို့ ဆိုနေတဲ့ မွတ်ဆလင် ၂ဝဝဝ ကျော်ကို မြန်မာ နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ဖို့အတွက် မြန်မာ အစိုးရဘက်က လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာ သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။အခု အဖမ်းခံ ထားရသူ တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို လှေစီးပြီး ရောက်လာတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လာသူတွေ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးသွားမယ် ဆိုတာကို မြန်မာ သံရုံးကနေ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဒီသတင်းပတ် အစောပိုင်းကပဲ ကတိပေး ပြောကြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး လဝက ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာသံရုံး သံအမတ်ကြီး ဦးတင်ဝင်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။တကယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက လာတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ရင်လည်း သူတို့ကို အရေးယူဖို့ မရှိသလို ကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း အရေးယူမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့မပို့ ဆိုတာကလည်း ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို မေးမြန်းပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်မယ့်အကြောင်း သံအမတ်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံသို့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တက်ရောက်မည်
Wednesday, 19 June 2013 03:42
ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံသို့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်သုံးဦး တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမင်းဇေယျက ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတကာရောက် ၈၈ မျိုးဆက်များမှ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံကို ဇွန် ၂၈ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တိုမြို့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ညီလာခံသို့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမင်းဇေယျ၊ ဦးပြုံးချို၊ ဦးအံ့ဘွယ်ကျော်တို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းဇေယျက ပြောကြားသည်။
၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက် အင်အားစုများ မျက်နှာစုံညီ ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ရေး၊ ၂၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး၊ ညီလာခံမှ တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဟန်ချက်ညီညီ ချိတ်ဆက်၍ ဆက်လက်လက်တွဲ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးသွားမည်။
၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံ တက်ရောက်ရန် ဦးပြုံးချို၊ ဦးအံ့ဘွယ်ကျော်တို့မှာ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကနေဒါနိုင်ငံသို့ စတင်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ဦးမင်းဇေယျမှာ ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာခံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ၈၈ မျိုးဆက် အင်အားစုများ မျက်နှာစုံညီ ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ရေး၊ ၂၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး၊ ညီလာခံမှ တူညီသော ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဟန်ချက်ညီညီ ချိတ်ဆက်၍ ဆက်လက်လက်တွဲ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းဇေယျက ပြောကြားသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့်မူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခွင့်အလမ်းများ၊ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမည့် အခက်အခဲများ၊ ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက်များ၏ တာဝန်နှင့် အခန်းကဏ္ဍ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စများကို နိုင်ငံတကာသို့ ရောက်ရှိနေသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ ၈၈ မျိုးဆက်များက အဓိကထား ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် ၈၈ မျိုးဆက် အဖွဲ့ဝင် သုံးဦးအနေဖြင့် လာမည့်ဇူလိုင် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၌ ကျင်းပမည့် နိုင်ငံတကာရောက် ၈၈ မျိုးဆက် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ခရီးဆက်လက် ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းဇေယျက ပြောကြားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၊ တိုရွန်တိုမြို့တွင်ကျင်းပမည့် (၈၈)မျိုးဆက်များညီလာခံသို့ မကဒတ(ကျောင်းသားတပ်မတော်) A.B.S.D.F ( All Burma Democratic Student Front – Thai Burma Border ) မှ ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟို၏ အကြောင်းကြားစာကို လည်း ရ ရှိ ပါ သည် ။
Preparation for 88-Generation Conference, Toronto, Canada - Chamber (photo below) designated for opening session.
welcoming reception of 88-Generation Conference in Toronto on June 28, 2013.
သရုပ်ဆောင်မေဇွန်အား အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၉ နှစ် ၄ လခ...
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ပီအာရ်စနစ်ကျင့်သုံးရေး အကြံအစည...
ကိုယ့်ရှေ့က ဂျင်နရေးရှင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပြောတတ်ြ...
ကနေဒါ နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ညီလာ...